DEG DEG+DHAGEYSO: Jubbaland oo markale dib u dhigtay Caleema-Saarka, Cadaadis kordhaya & Wararkii u dambeeyey -News and information about Somalia
Home Warkii DEG DEG+DHAGEYSO: Jubbaland oo markale dib u dhigtay Caleema-Saarka, Cadaadis kordhaya &...
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa cadeynaya in dib loo dhigay markale munaasabada Caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana ay ahayd in la qabto 9ka bishan ama 10-ka, balse hadda warar dheeraad ah oo la helayo ayaa sheegaya in dib loo dhigay ilaa xili aan la shaacin.
Dib u dhigida cusub ayaa ka dambeysa, ka dib markii ay dawladda Soomaaliya xayiraad kusoo rogtay shaqsiyaad ka qeybgali lahaa oo ay ku jiraan Madaxdii hore oo kusugan Muqdisho, soona gaari lahaa magaalada Kismaayo, waxaana sidaas oo kale jira warar kasoo kordhay diyaaradii soo qaadi lahayd.
Xildhibaan C/risaaq Axmed Maxamed Jindi oo katirsan golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u xaqiijiyey warkan in dib loo dhigay Xaflada caleema-saarka Axmed Madoobe oo Arbacada todobaadkaan lagu qaban lahaa Kismaayo.
Xildhibaanka ayaa sheegay in sababta dib u dhaca ay keentay,kadib markii sida uu sheegay siyaasiyiin doonayey inay ka qeyb-galaan Xaflada ay dowladda Soomaaliya u diiday inay ka dhoofan Magalada Muqdisho si ay u aadaan Magalada Kisamayo.
Masheegin Xildhibaanka oo kamid ahaa wafdigii dhawaan tegay Kismaayo oo ay kamid ahaayeen Madaxweyneyaashii hore ee Galmudug Cabdi Kariin Guuleed iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo Xaflada Caleema-saarka.
Warar hoose ayaa sheegaya in xayiraadii iyo shatigii lagala laabtay shirkadii katagtay Kismaayaba ay ahayd caqabadaha waa weyn ee hadda saameynaya arrimaha Caleema-Saarka Madaxweynaha Jubbaland, balse uu qabsoomi doono todobaadka dambe bilowgiisa hore.
Previous articleDF oo shatigii duulimaadyada kala laabatay diyaaraddi Kismaayo ka dejisay Shariif Xasan & Ckariin X.Guuleed
Next articleXasan Sheikh oo Iftiimiyay Ujeedada Villa Somalia ka leedahay Xoogaga Wadaniyiinta
Ciidan gadoodsan oo xirtay mid ka mid ah Jidadka muhiimka ah...
SAWIRRO: Guddoomiye Mursal oo la kulmay wakiilo ka socda UN-ka iyo...